Bisadeyda dhimashadeeda waxaa iiga xumaa heshiiskii Fellaini! – Gool FM
Bisadeyda dhimashadeeda waxaa iiga xumaa heshiiskii Fellaini!
Kaafi January 12, 2017
(Manchester) 12 Jan 2017. Go’aankii ay Manchester United qandaraaska ugu dheereysay Marouane Fellaini waxa ay ahayd in uu war wanaagsan u noqdo kooxda ka dhisan Premier League-ga – laakiin falcelinta jamaahiirteeda waxa uu ahaa mid aan la aamini Karin!
Fellaini waxaa uu wajahay dhaleeceyn la xiriirta bandhig xumadii dhinaca Jose Mourinho, halka taageereyaal badan oo kooxda ah ay duudka u saariyeen laacibka khadka dhexe ee Belgium.
Marka laga yimaado in uu United ka caawiyey sagaal kulan oo guulo xiriir ah, Fellaini wali horumar kama sameyn iska iibinta taageereyaasha, markii lagu dhawaaqay warkii sheegayey in loo kordhiyey qandaraaska jamaahiirta dubrba waxa ay muujiyeen sida ay uga xun yihiin.
Heshiiska cusub ee Fellaini waxa uu ku hayn doonaa Old Trafford ilaa iyo 2018.
-Waxaan iibineynaa Schneuderlin, waxaan direynaa Bastian laakiin waxaan ceshaneynaa Fellaini
-Heerka labaad ayaan u laabaneynaa
-Bisadeyda ayaa saaka dhimatay hadana warka aam maqlo kan ayaa iigu adag!
Cristiano Ronaldo oo sanadkii 3-aad oo xiriir ah ku guuleystay abaal marinta Salon d'Or
RASMI: Morgan Schneiderlin oo ku biiray Everton